Nagu saabsan - Beijing Zohonice Qalabka Qurxinta Co., Ltd.
Laga soo bilaabo 2008, waxaan ku takhasusay tikniyoolajiyad xirfadeed iyo horumarsan oo loogu talagalay meelaha lagu qurxiyo, meelaha isboortiga, xarumaha caafimaadka iyo dhaqanka.
Hadafkeenu wuxuu ku wajahan yahay gaarsiinta macaamiisha iyadoo la adeegsanayo fikradaha hal-abuurka daaweynta ee fekerka leh oo ay weheliso heer adeeg oo aan la qiyaasi karin iyo taageerada ganacsi ee socota waxay aragtay kooxdeena inay si deg deg ah ugu xuubsiibanayso hoggaamiyeyaasha warshadaha - dejinta halbeegga waxa suurtagal ka ah barxadda bilicsan ee bilicsanaanta. Waqtigan xaadirka ah, waxaan bixinnaa tikniyoolajiyad daaweyn ah iyo taageero koritaan ganacsi in ka badan 2,000 kaydka ku baahsan Shiinaha.
Waxaan ku adkeysaneynaa inaan ka bilowno baahida macaamiisha, sii wadno bixinta adeegyo soo-jeedin xulasho badeecadeed oo aad u wanaagsan, iibinta badeecadaha hormuudka u ah warshadaha, isla markaana u abuurno qiimaha ugu badan macaamiisha. Ku qanacsanaanta macaamilku waa caqiidadeena adeeg.
Kooxdayadu waxay ka kooban yihiin in ka badan 30 khabiir ku takhasusay teknolojiyadda oo ay ka mid yihiin injineero aqoon leh, suuqleyda, la-taliyayaal tiknoolajiyadeed, barayaal, daryeelka macmiilka, saadka, dhaqaalaha, maamulka iyo shaqaalaha maamulka. Iyada oo loo marayo shabakaddan isku xidhka ah, waxaan ku qalabeyneynaa ganacsiyada quruxda leh ee nooc kasta leh iyo khibrad u leh helitaanka tayada ugu sareysa iyo darajada darajada caafimaad ee qalabka bilicsanaanta - dhammaantoodna si qoto dheer loo baaray oo laga helay hal-abuureyaasha adduunka ugu wanaagsan ee tikniyoolajiyadda horumarsan ee loo yaqaan 'salon', spa, clinic iyo dhaqan.
Dabcan, kooxdeena ganacsiga ajaanibta waxay ka kooban yihiin koox dhalinyaro kulleejo jecel oo jecel warshadaha qurxinta. Waxay ku xeel dheer yihiin Ingiriisiga, Isbaanishka, Jarmalka, Faransiiska, iyo Carabiga, waxayna siiyaan macluumaad ku habboon waqtiga saxda ah ee warshadaha, hordhaca alaabta, iyo howlaha macaamiisha adduunka oo idil. Hanuuninta, tarjumaada iibka kadib iyo shaqooyinka kale ee taageerada khadka tooska ah.
Waxaan nahay bixiyaha tikniyoolajiyadda ugu horreeya markay tahay:
>> IPL Mashiinka Timo Saarida
>> 808nm mashiinka timo jarista laser-ka diode
>> Mashiinka slimming qaboojinta ee Cryolipolysis
>> IPL LASER RF Qalabka Multifunction
>> Qalabka quruxda laser-ka CO2
>> Nalalka maqaarka ee loo yaqaan 'LED PDT'
>> IPL YAG laser Dayactir qayb
>> Nd: Yag Laser Tattoo Machine saarista
>> Guriga Isticmaal Mashiinka Qurxinta Yar
>> Mashiinka cusbooneysiinta maqaarka ee wajiga kor u qaada
>> Ilkaha oo caddeeya
>> Dib-u-Timaha Laser
waxaan ka dhigeynaa dad qurxoon .magacdabo .comforable.
"Zohonice Beauty Equipment Co.LTD" waa in loo tixgeliyaa salon, spa, bukaan socod eegto iyo Milkiilayaasha Pratics inay hogaamiyaan moodada quruxda badan ee la xareeyay lana abuuro qaab cajaa'ib sare leh ..
Faa'iido lagu kalsoonaan karo oo karti u leh Xamaasad, Wax-soo-saar, Ixtiraam, Ganacsi Taageero, Madadaalo.